Ezinye izindlela zokwenza izoso zemifino | Bezzia
UPau Heidemeyer | 03/05/2021 16:00 | Ukudla okunomsoco, Ezempilo
Isimo sezulu esihle siqala sibheka noma iyiphi impelasonto ukuthi sibe ne-barbecue futhi sijabulele inyama enhle. Esikhundleni salokho, kulokho okulandelayo ukudla okunomifino kuphela, kungahle kubonakale sengathi ngeke bajabulele kakhulu njengalabo abadla inyama.
Lokhu akulona iqiniso ngokuphelele, ngoba izoso ziyakwazi ukwamukela izidingo zabantu abadla imifino kuphela, futhi zijabulise ngendlela efanayo. Uma ufuna ukwazi ezinye izindlela ezihamba phambili, Sizokutshela ke.
Ukuba ngumuntu odla imifino kuphela kunendlela yokuphila ehlukile, kanjalo nabo bangakujabulela ukosa inyama ngendlela evumelaniswe nokukhetha kwabo kokudla.
Izinketho ezingasuswa phakathi kwazo ama-skewers ajwayelekile emifino, ama-vegan burger anamakhowe, ama-burger we-legume noma imifino eyosiwe enososo wemifino. Isoso semifino sizohlala sinempilo njalo nje uma ucabanga ngalokho ohambisana nakhonjengoba izinongo zingaba "zimbi" njengalezo ezisetshenziswa nenyama.
Uma ufuna ukwazi ezinye izinketho zokwenza ifayela le- izoso zemifinoSizokutshela ngezansi ukuze ube nezinketho eziningi engqondweni, ukuthi mhlawumbe wawungakaze uwele kuzo.
1 Ezinye izindlela ezihamba phambili zebhayisikili yemifino
1.1 Ama-skewers emifino
1.2 Izibopho zeSeitan
1.3 Imifino ehlanganisiwe
1.4 Ama-burger weveggie
1.5 Ummbila owosiwe
1.6 Isaladi efudumele
1.7 Ukugqoka i-yogurt
2 Ungayithathi kancane imifino kusoso
Ezinye izindlela ezihamba phambili zebhayisikili yemifino
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuhlela izoso lemifino. Ngaphezu kwalokho, uzothola izinketho ezinhle ezizokuvumela ukuthi ujabulele i-gastronomy nezinye izici.
Ama-skewers angenziwa futhi ngemifino kuphela, lawa afakwa futhi nephunga nokunambitheka okushiywe amalahle. Ngaphezu kwalokho, kuletha njalo umbala omningi ku-grill. Ukusetshenziswa kwale mifino kujwayelekile: u-anyanisi, upelepele oluhlaza nobomvu, utamatisi, i-aubergines noma i-zucchini.
Amakhowe nawo angahle aphelele ekugcobeni. Kumele uwasike abe yizicucu ukuze uwafake ezindlekweni ezenziwe ngokhuni noma ngensimbi ukuze ukwazi ukuhlanganisa ama-skewers ngokuthanda kwakho. Lapho bepheka, ungangezela amakhambi athile namafutha ukwenza kube mnandi kangcono.
Uma ufuna ukwengeza inani lamaprotheni kula ma-skewers ongakwenza engeza ama-cubes we-tofu kanzima. Lo mkhiqizo, okuvela kuwo ubhontshisi, usetshenziselwe ukwandisa umthamo wamaprotheni kubantu abaningi abathatha isinqumo sokudla imifino noma i-vegan.
Njengo-tofu, ungenza ama-seitan fillets, ukudla okuwumphumela we-gluten kakolweni otholwe ngokuxova ufulawa bese ukugeza ukuze kukhishwe isitashi. Ngaphezu kwalokho, inikeza amaprotheni aphindwe kathathu kunenyama, okungenani ama-75%.
Ukwenza ama-seitan fillets ungalandela le recipe encane.
Ingxenye eyodwa kafulawa we-chickpea.
Izingxenye ezingu-2-3 zikafulawa kakolweni.
Ingxenye eyodwa yesinkwa noma ummbila.
Hlanganisa namanzi, umhluzi wemifino, nesosi yesosi.
Lezi zibopho zinganongwa ngezinongo, uzilolonge bese uziyisa ku-grill. Ngakho-ke i-seitan yakho izoba namanzi kakhulu, inwebe futhi ibe nethoni ethosiwe ethakazelisa kakhulu.
Ungakhuthazwa ukuthi ulungiselele imifino egxishiwe yebhayisi yakho yemifino. Ungasebenzisa i-zucchini noma utamatisi, isibonelo. Ungabagcwalisa ngesipinashi noma ukhilimu we-chard, futhi ungangeza i-tofu ukwandisa ukudla kwayo kwamaprotheni.
Ama-eggplants namakhowe Bangabuye bagcwaliswe futhi baphelele ku-barbecue. Uma une-lacto-vegetarian ungasebenzisa ushizi ukuyenza ibe nejusi.
AmaBurger imvamisa yizindlovukazi zokosa inyama futhi kulokhu, nawo angaba njalo. Ama-burger yemifino enziwe ngamabele nokusanhlamvu. Zihlanganiswe nemifino, kungaba isipinashi noma isanqante isibonelo. Lokhu kubanikeza ukuthungwa okuhle nokunambitheka.
Amachickpeas noma udali angasetshenziswa njengemidumba, ngaphezu kwalokho, zingalungiswa sengathi ziyi-falafel eboshiwe. Imidumba ingahambisana ne amakhekhe, ugarlic, iparsley, upelepele nosawoti.
Uma ungeyena umlandeli wemidumba, ungenza futhi ama-hamburger asuselwa elayisi, uphizi noma ngama-oats. Sebenzisa konke okusanhlamvu okuthandayo, yenza ucwaningo lwakho bese uzijabulisa ekhishini.
Yize kunganakwa, ummbila ophekiwe kusikhwebu uphelele ukugcoba i-barbecue. Ummbila unezimfanelo ezinhle zokudla okunempilo, futhi enye yezindlela ezinhle zokuyithatha kusoso.
Ummbila uhlala uhambisana nesoso esihle semifino. Ungabrasha yonke isikhwebu ngamafutha ngaphambi kokuyisonga kucwecwe lwe-aluminium. Yibeke ku-grill, uyijike imizuzu engu-15 ukuze yenziwe kahle yonke indawo.
Ungenza isaladi eseceleni okuyisikhungo sakho konke ukunakwa, nge utamatisi, ulethisi, ama-endives, ikhukhamba, nayo yonke imifino oyifunayo.
Ulethisi waseRoma ulungele ukwenza isaladi enhle, inhliziyo ibanda futhi iyintsha. Futhi, uma uhamba nesaladi ngokugqoka okuhle, uzoba nesaladi ephelele. Faka uwoyela omuhle, uviniga webhalsamu, usawoti, upelepele nezinye izinongo.
EKubalulekile ukuthi ulinganise isikhathi sokupheka salesi saladi esifudumele, ngoba azikwazi ukuba zide ku-grill, ngokwesibonelo, ikhukhamba lingaba umzuzu owodwa, kepha imizuzu emibili ye-endive, uma uchitha isikhathi, ukushisa kuzothambisa imifino kakhulu.
Ekugcineni, ungabheja kusoso owenziwe nge-yogurt okuvumela ukuthi unikeze ukuthinta okukhethekile kwimifino yakho futhi akunjalo. I-yogurt ivumela izinketho eziningi, ingaxubaniswa negalikhi kanye nekhukhamba ukwenza i-tzaiziki yakudala, ungahamba ne-yogurt ne-soy sauce ukuyinikeza ukuthinta okwehlukile.
Ungaphinde uhlanganise iyogathi, notamatisi oqoshiwe, u-anyanisi ne-coriander, ngakho-ke uzothola i-raita ecebile enesitayela samaNdiya. Kuyizinketho ezinhle ukuze ukwazi ukuhamba nemifino nama-hamburger owalungiselele ngaphambilini.
Ungayithathi kancane imifino kusoso
Njengoba ubonile, kunezindlela eziningi ongazenza kusoso lwemifino, ngoba sonke sicabanga ngenyama futhi akukho okunye ngaphandle kwenyama. Kepha imifino, ama-hamburger, ama-skewers noma amasaladi angaba kuhle nje nocezu lwenyama.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Ezinye izindlela zokwenza izoso zemifino